प्रसुति गृहमै एक बर्षमा ८ हजार सुत्केरी शल्यक्रियाबाट, किन रोज्छन् महिला सि–सेक्सन? – Health Post Nepal
प्रसुति गृहमै एक बर्षमा ८ हजार सुत्केरी शल्यक्रियाबाट, किन रोज्छन् महिला सि–सेक्सन?
२०७८ भदौ २८ गते १६:१२
नेपालमा पछिल्लो समय प्रसूतिमा शल्यक्रियाको प्रयोग अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको अस्पतालका तथ्यांकले देखाइरहेका छन्। विशेषगरी, सहरी क्षेत्रका अधिकांश महिलाले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने गरेको पाइएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालमा नै शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति हुने संख्या बढिरहेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले ३५ प्रतिशत डेलिभरी शल्यक्रिया मार्फत गरेको देखाएको छ।
बढ्दै छ अप्राकृतिक डेलिभरी
विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रसूतिमा १५ प्रतिशतसम्म शल्यक्रियालाई सामान्य मानेको छ। तर, सरकारी स्तरका अस्पतालमा शल्यक्रिया मार्फत डेलिभरी गराउनेको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।
आर्थिक बर्ष २०७४–०७५ मा प्रसुती अस्पतालमा २९ प्रतिशतले मात्र शल्यक्रिया मार्फत डेलिभरी गरेका थिए। तर, सो संख्या २०७७–०७८ मा बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
‘सिजरिन विधिबाट प्रसुति गराउनेको अनुपात गत वर्षभन्दा २.२४ प्रतिशत र २०७४–०७५ को तुलनामा ५.८७ प्रतिशत बढेकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको दरभन्दा यो बर्ष २०.२८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अस्पतालमा २०७७–०७८ मा २२ हजार ४ सय ६१ जनाले प्रसुती सेवा लिएका छन्। जसमध्ये १२ हजार ०५४ जनाको प्राकृतिक डेलिभरी भएको छ।
त्यसैगरी, असान्य प्रसुति १० हजार ४ सय ७ र सिजरिन सेक्सनबाट ७ हजार ९सय ४५ जनाको डेलिभरी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सि–सेक्सनले बच्चा र आमामा दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम
विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार स्वाभाविक प्रसूतिको तुलनामा शल्यक्रियामार्फत जन्मेका बच्चामा दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम रहन्छ। डेलिभरीमा शल्यक्रिया (सि–सेक्सन) प्रविधिको प्रयोगले बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पुर्याउन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार अस्पतालमा हुने डेलिभरीमा १५ प्रतिशतसम्म सिजर हुनु नराम्रो मानिँदैन। स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार हालका दिनमा सि–सेक्सन अत्यधिक बढिरहेको छ। जसले महिलाका तथा बच्चाको लागि दीर्धकालिन असर पुर्याउने गर्दछ।
‘आवश्यकताअनुसार सिजर गरिएमा आमा तथा बच्चा दुवैले त्यसबाट फाइदा पाउन सक्छन। तर, नगण्य जनसंख्याले भने फेसनका लागि पनि सिजर गराउने गरेको कुरालाई नकार्न नसकिने स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. गीता गुरुङ बताउँछिन्।
गर्भावस्थामा व्यायाम, आराम र पोषणको सन्तुलन नमिल्नाले पनि प्रसूतिको समयमा समस्या आउँछ, जसले सि–सेक्सन निम्त्याइरहेको छ।
‘गर्नैपर्ने अवस्थामा त प्रविधिको प्रयोग गर्नु नै पर्यो, तर निजी अस्पतालहरूमा सिजरियन सेक्सन बढी नै हुने गरेका छन्,’ डा. गुरुङ भन्छिन्।
कस्तो अवस्थामा गर्नुपर्छ शल्यक्रिया
प्रसूतिको समयमा बच्चाको घाँटीमा नाल बेरिएको अवस्था, बच्चाले पेटभित्रै दिसा गरेको अवस्था, प्रसव पीडा लम्बिँदै गएर बच्चा र आमाको जीवन नै जोखिममा रहेको अवस्थामा आकस्मिक अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतया बच्चा आवश्यकताभन्दा ठूलो भएमा तथा बच्चा आउने बाटो सानो भएमा, एकदमै उच्च रक्तचाप भएका गर्भवती जसलाई सुत्केरी व्यथा लगाएर डेलिभरी गराउन पर्याप्त समय हुँदैन, बच्चाले पेटभित्रै दिसा गर्यो तथा बच्चाको मुटुको धड्कन तलमाथि भएको अवस्था, लामो समयसम्म महिलालाई सुत्केरी व्यथा लागेको अवस्था, सामान्यतया पाठेघरको माथि बस्ने साल तल बसेको अवस्थामा डेलिभरीका लागि शल्यक्रियाविधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
गर्भमा जुम्ल्याहा बच्चा रहेको अवस्थामा र जुम्ल्याहा बच्चा जन्मने निश्चित भएको अवस्थामा, बच्चाको टाउको माथि फर्केर रहेको वा पाठेघरमा बच्चा उल्टो परेर बसेको अवस्थामा, तोकिएको समयभन्दा पहिले नै डेलिभरी हुन लागेको अवस्थामा, गर्भनाल थुनिएको अवस्थामा र गर्भवती एचआइभी, हेपाटाइटिस वा अन्य भाइरस संक्रमित भएको खण्डमा आकस्मिक शल्यक्रिबाट बच्चा जन्माउनुपर्ने हुन्छ ।
गर्भवती महिलाको नितम्बको साइज सानो भएको अवस्थामा अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पताल